"ရင်နင့်အောင်ခံစားရသော အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခု" - Tameelay
တစ်နေ့မှာ ကျနော်လမ်းလျှောက်နေတုန်း ဖုန်းသံမြည်လာတယ်…
ဖုန်းကောက်ကိုင်လိုက်တော့ ဖုန်းသံထဲက ကြားရတဲ့အသံက နုနယ်တဲ့ မိန်းကလေးလေးရဲ့အသံလေးပါ…
“ဖေဖေ မြန်မြန် ပြန်လာတော့လေ… မီးမီး ဖေ့ဖေ့ကို အရမ်းသတိရနေတယ်…”
အာရုံမှာ ချက်ချင်းသိလိုက်တယ်… ဒါဟာ ဖုန်းမှားနေတယ်ဆိုတာ…
ဒီခေတ်ဒီခါမှာ ဒါမျိုးဟာ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး…
ကျနော်လဲ စိတ်မရှည်စွာနဲ့ဘဲ ပြောလိုက်တယ်… “ဖုန်းမှားနေပြီ” ဆိုပြီး ဖုန်းကိုချလိုက်တယ်…
နောက်ရက်တွေမှာလဲ ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ခဏခဏ မှားဝင်လာတယ်…
စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်လာတယ်… တခါတလေ စိတ်တိုပြီး အော်ပြောလိုက်တယ်… တခါတလေ ဖုန်းမကိုင်ဘဲ ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်…
တနေ့မှာ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ခဏခဏ ဖုန်းဝင်လာတယ်… ခါတိုင်းနဲ့မတူတာက ဖုန်းမကိုင်မချင်းကို ခေါ်နေတော့တာဘဲ…
နောက်ဆုံးတော့လဲ ကျနော် ဖုန်းကို လက်ခံပြီးနားထောင်လိုက်တယ်…
ဟိုးဘက်က ကြားရတဲ့အသံလေးက တော်တော်လေးကို အားပျော့နေတဲ့ မိန်းကလေးလေးရဲ့အသံလေးပါ…
“ဖေဖေ မြန်မြန်ပြန်လာတော့လေ… မီးမီး ဖေဖေ့ကို သတိရတယ်… မေမေက ပြောတယ်… ဒီဖုန်းနံပါတ်မမှားဘူးတဲ့… ဖေဖေ ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘဲတဲ့…
မီးမီး အရမ်းနာနေတယ်… မေမေကပြောတယ်… ဖေဖေက အလုပ်အရမ်းများနေတယ်တဲ့… သမီးကို မေမေ တစ်ယောက်တည်းဘဲ ပြုစုနေတာ …
မေမေလဲ တော်တော်လေး ပင်ပန်းနေပြီ… သမီးသိတယ်… ဖေဖေ အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေတယ်ဆိုတာ…
ဖေဖေ မလာနိုင်ရင်လဲ မီးကို ဖုန်းကနေဘဲ မွေးမွေး တစ်ချက်ပေးပါနော်…”
ကလေးလေးရဲ့ ရိုးသားလှတဲ့တောင်းဆိုမှုလေးကို ကျနော် မငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး… ဖုန်းနားကို ကပ်ပြီး မွက်မွက် ဆိုပြီး မွေးမွေးပေးလိုက်တယ်…
ဟိုဘက်က ကလေးလေးရဲ့ ပြောနေသံလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်…
“ကျေးဇူးဘဲ ဖေဖေ… မီး အရမ်းပျော်သွားပြီ… မီး ဖေဖေ့ကို အရမ်းချစ်တယ်”
ဖုန်းကောက်ဆက်လိုက်တော့ ဖုန်းကိုင်လိုက်တာက မိန်းကလေးမဟုတ်ဘဲ အသံလေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အသံ…
“အစ်ကို့ကို တောင်းပန်းပါတယ်… ဒီရက်ပိုင်းမှာ အစ်ကိုလဲတော်တော်လေး စိတ်ရှုပ်သွားမိလိမ့်မယ်…
ကျမ လုပ်စရာလေးတွေ ပြီးလို့ရှိရင် အစ်ကိုဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး တောင်းပန်ဖို့ စီစဉ်းထားတယ်…
ဒီ ကလေးလေးရဲ့ ကံကြမ္မာ မကောင်းရှာဘူး… မွေကတည်းက မွေးရာပါ အရိုးကင်ဆာ ပါလာတယ်…
သူ့ဖေဖေကလဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကမှ ကားတိုက်မိလို့ ဆုံးသွားတာ မကြာသေးဘူး… ဒီကိစ္စ သူ့ကို ပြောပြဖို့ ကျမမှာ အင်အားမရှိဘူး…
နေ့တိုင်း ဆေးတွေထိုးရတာ အမြဲတမ်းလိုလို နာကျင်နေပြီ… ကလေးလေးလဲ ဒီဒဏ်ကို တော်တော်လေးခံနေရပြီ…
နာကျင်မှုဝေဒနာ အဆိုးဆုံး အချိန်တွေမှာ သူ့ပါးစပ်ကနေ တတွတ်တွတ် အော်နေတာကတော့ အရင်က သူ့အနားမှာ သူ့ကို သတ္တိ ရှိဖို့ အမြဲတမ်း အားပေးနေတဲ့
သူ့ဖေဖေ ပါဘဲ… ကျမလဲ မကြည့်ရက်တော့လို့ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုပေးလိုက်တာ အစ်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်နေတာပါ”
“အဲ့ ကလေး အခု အခြေအနေဘယ်လိုနေသေးလဲ” ကျနော်သိချင်စောနဲ့ကောက်မေးလိုက်တယ်…
“မီးမီးလေး လူ့ဘ၀ကနေ ထွက်သွားပါပြီ… အစ်ကို အဲဒီ အချိန်တုန်းက သူ့ကို ဖုန်းထဲကနေ အနမ်းလေးပေးလိုက်ပုံရတယ်…
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ပြုံပြီး ထွက်သွားတာပါ… ထွက်သွားခါနီး
သူ့ရဲ့လက်သေးသေးလေးထဲမှာ “ဖေဖေ့” အသံကို ကြားနိုင်တဲ့ ဖုန်းကို မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားရှာတယ်…”
တဈနမှေ့ာ ကနြျောလမျးလြှောကျနတေုနျး ဖုနျးသံမွညျလာတယျ…
ဖုနျးကောကျကိုငျလိုကျတော့ ဖုနျးသံထဲက ကွားရတဲ့အသံက နုနယျတဲ့ မိနျးကလေးလေးရဲ့အသံလေးပါ…
“ဖဖေေ မွနျမွနျ ပွနျလာတော့လေ… မီးမီး ဖဖေ့ကေို့ အရမျးသတိရနတေယျ…”
အာရုံမှာ ခကျြခငျြးသိလိုကျတယျ… ဒါဟာ ဖုနျးမှားနတေယျဆိုတာ…
ဒီခတျေဒီခါမှာ ဒါမြိုးဟာ မထူးဆနျးတော့ပါဘူး…
ကနြျောလဲ စိတျမရှညျစှာနဲ့ဘဲ ပွောလိုကျတယျ… “ဖုနျးမှားနပွေီ” ဆိုပွီး ဖုနျးကိုခလြိုကျတယျ…
နောကျရကျတှမှောလဲ ဒီဖုနျးနံပါတျနဲ့ ခဏခဏ မှားဝငျလာတယျ…
စိတျအနှောငျ့အယှကျ ဖွဈလာတယျ… တခါတလေ စိတျတိုပွီး အျောပွောလိုကျတယျ… တခါတလေ ဖုနျးမကိုငျဘဲ ဒီတိုငျးထားလိုကျတယျ…
တနမှေ့ာ အဲဒီဖုနျးနံပါတျနဲ့ ခဏခဏ ဖုနျးဝငျလာတယျ… ခါတိုငျးနဲ့မတူတာက ဖုနျးမကိုငျမခငျြးကို ချေါနတေော့တာဘဲ…
နောကျဆုံးတော့လဲ ကနြျော ဖုနျးကို လကျခံပွီးနားထောငျလိုကျတယျ…
ဟိုးဘကျက ကွားရတဲ့အသံလေးက တျောတျောလေးကို အားပြော့နတေဲ့ မိနျးကလေးလေးရဲ့အသံလေးပါ…
“ဖဖေေ မွနျမွနျပွနျလာတော့လေ… မီးမီး ဖဖေကေို့ သတိရတယျ… မမေကေ ပွောတယျ… ဒီဖုနျးနံပါတျမမှားဘူးတဲ့… ဖဖေေ ရဲ့ဖုနျးနံပါတျဘဲတဲ့…
မီးမီး အရမျးနာနတေယျ… မမေကေပွောတယျ… ဖဖေကေ အလုပျအရမျးမြားနတေယျတဲ့… သမီးကို မမေေ တဈယောကျတညျးဘဲ ပွုစုနတော …
မမေလေဲ တျောတျောလေး ပငျပနျးနပွေီ… သမီးသိတယျ… ဖဖေေ အလုပျအရမျးရှုပျနတေယျဆိုတာ…
ဖဖေေ မလာနိုငျရငျလဲ မီးကို ဖုနျးကနဘေဲ မှေးမှေး တဈခကျြပေးပါနျော…”
ကလေးလေးရဲ့ ရိုးသားလှတဲ့တောငျးဆိုမှုလေးကို ကနြျော မငွငျးဆနျနိုငျခဲ့ဘူး… ဖုနျးနားကို ကပျပွီး မှကျမှကျ ဆိုပွီး မှေးမှေးပေးလိုကျတယျ…
ဟိုဘကျက ကလေးလေးရဲ့ ပွောနသေံလေးကိုကွားလိုကျရတယျ…
“ကြေးဇူးဘဲ ဖဖေေ… မီး အရမျးပြျောသှားပွီ… မီး ဖဖေကေို့ အရမျးခဈြတယျ”
ဖုနျးကောကျဆကျလိုကျတော့ ဖုနျးကိုငျလိုကျတာက မိနျးကလေးမဟုတျဘဲ အသံလေးနတေဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အသံ…
“အဈကို့ကို တောငျးပနျးပါတယျ… ဒီရကျပိုငျးမှာ အဈကိုလဲတျောတျောလေး စိတျရှုပျသှားမိလိမျ့မယျ…
ကမြ လုပျစရာလေးတှေ ပွီးလို့ရှိရငျ အဈကိုဆီ ဖုနျးဆကျပွီး တောငျးပနျဖို့ စီစဉျးထားတယျ…
ဒီ ကလေးလေးရဲ့ ကံကွမ်မာ မကောငျးရှာဘူး… မှကေတညျးက မှေးရာပါ အရိုးကငျဆာ ပါလာတယျ…
သူ့ဖဖေကေလဲ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးကမှ ကားတိုကျမိလို့ ဆုံးသှားတာ မကွာသေးဘူး… ဒီကိစ်စ သူ့ကို ပွောပွဖို့ ကမြမှာ အငျအားမရှိဘူး…
နတေို့ငျး ဆေးတှထေိုးရတာ အမွဲတမျးလိုလို နာကငျြနပွေီ… ကလေးလေးလဲ ဒီဒဏျကို တျောတျောလေးခံနရေပွီ…
နာကငျြမှုဝဒေနာ အဆိုးဆုံး အခြိနျတှမှော သူ့ပါးစပျကနေ တတှတျတှတျ အျောနတောကတော့ အရငျက သူ့အနားမှာ သူ့ကို သတ်တိ ရှိဖို့ အမွဲတမျး အားပေးနတေဲ့
သူ့ဖဖေေ ပါဘဲ… ကမြလဲ မကွညျ့ရကျတော့လို့ ဖုနျးနံပါတျ တဈခုပေးလိုကျတာ အဈကိုရဲ့ဖုနျးနံပါတျဖွဈနတောပါ”
“အဲ့ ကလေး အခု အခွအေနဘေယျလိုနသေေးလဲ” ကနြျောသိခငျြစောနဲ့ကောကျမေးလိုကျတယျ…
“မီးမီးလေး လူ့ဘဝကနေ ထှကျသှားပါပွီ… အဈကို အဲဒီ အခြိနျတုနျးက သူ့ကို ဖုနျးထဲကနေ အနမျးလေးပေးလိုကျပုံရတယျ…
ဟုတျတယျမဟုတျလား… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ပွုံပွီး ထှကျသှားတာပါ… ထှကျသှားခါနီး
သူ့ရဲ့လကျသေးသေးလေးထဲမှာ “ဖဖေေ့” အသံကို ကွားနိုငျတဲ့ ဖုနျးကို မွဲမွဲ ဆုပျကိုငျထားရှာတယျ…”
ချိုင်းကြားအသားအရေကို ဖြူဝင်းစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်း (၅) သွယ်
မင်္ဂလာပါနော်။ ချိုင်းကြားအသားအရေလေး မည်းနေလို့ စိတ်ညစ်နေလား။ ချိုင်းကြားအသားအရေ မည်းညစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှု ရှိမှာမဟုတ်သလို အင်္ကျီလက်ပြတ်လည်း ဝတ်ရတာ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ဒါကြောင့် ချိုင်းကြားအသားအရေလေး ဖြူဝင်းပြီး သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ သခွားသီး သခွားသီးဟာ မျက်ကွင်းညိုတာ၊ …
၇ ရက်သားသမီးများအတွက် နေ့နာမ်အလိုက် အရမ်းမှန်တဲ့ အချစ်ဗေဒင်
တနင်္ဂနွေ သားသမီး … အရမ်းချစ်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် နှစ်ယောက်ပြိုင်တူ ထားချင်တတ်တယ်။ သူတို့ အတွေးကတော့ အချစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပြီးရမှာလား။ အချစ်ဆိုတာ ပေးလို့ ကုန်သွားတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာနော် ….လို့ များသောအားဖြင့် ခံယူထားတတ်ကြတယ်။ အခြေအနေပေးရင် တစ်ယောက်ထက်ပိုရတတ် ယူတတ်ပါတယ်။ သူများ အထင်ကြီး လေးစားအောင်ပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ …
အရေးကြီးလို့ သင့်အတွက် ပြောတာပါ..။ ဒီ (၅) မျိုးနဲ့ သင်ဘယ်တော့မှ အတူတူ မအိပ်မိပါစေနဲ့
သင် ဒီ (၅) မျိုးနဲ့ လုံးဝလုံးဝ အတူတူ မအိပ်ပါနဲ့..။ အရေးကြီးလို့ သင့်အတွက် ပြောတာပါ..။ အတူတူမအိပ်သင့်တဲ့ အရာ (၅) မျိုး ၁. နာရီဝတ်ပြီး မအိပ်ပါနဲ့.. နာရီဟာရေဒီယိုသတ္တိကြွထုတ်လွှင့်မှုအတော်မြင့်မားပါတယ်… နာရီဟာသေးငယ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ၀တ်ဆင်ပြီး အချိန်ကြာကြာ အိပ်ခဲ့ရင်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်တဲ့…. ဒါကြောင့်အိပ်တဲ့အခါ နာရီကို …